Porofon'ny arkeolojia fa mainty i Hannibal - Afrikhepri Fondation
Porofo ara-Baiboly fa mainty i Hannibal
HAnnibal Barca (amin'ny teny fenisianina Hanni -al midika hoe "izay tian'i Bala" sy Barca, "tselatra"), antsoina matetika hoe Annibal na Hannibal, teraka tamin'ny 247 talohan'i JK. AD tany Carthage (avaratra atsinanan'ny Tunis ankehitriny any Tonizia) ary maty namono tena tamin'ny 183 talohan'i JK. BC any Bithynia (akaikin'ny Bursa ankehitriny any Tiorkia), jeneraly sy mpanao politika Carthaginian, izay heverina ho iray amin'ireo taktika miaramila lehibe indrindra teo amin'ny tantara.
Hannibal Barca angamba jeneraly miaramila mainty hoditra any Carthaginian, nanjary nalaza noho ny fiampitany ny Alpes, ny fahaizany mandanjalanja talohan'ny nanaovany fampielezan-kevitra lehibe, ny fahaizany tetika teo amin'ny ady, ary ny fahaizany miasa nandritra ny ady. iray amin'ireo komandin'ny miaramila lehibe indrindra teo amin'ny tantara. Nandritra ny Ady Punic faharoa, dia nandresy tamin'ny tafika romana i Hannibal, indrindra fa ny ady tany Cannes, izay romana 70.000 XNUMX no maty vokatry ny fifamofoana. Ny famakafakana ireo vola madinika hita tany Italia, akaikin'ny faritry ny farihin'i Trasimeno izay nandresen'i Hannibal an'ny tafika Carthage ny Romana, dia mampiseho lehilahy afrikanina iray amin'ny lafiny iray manana endrika mampiavaka an'i Afrika, toy ny volo olioly, molotra matevina, orona ary feno, ny ampinga mifanohitra dia mampiseho elefanta.
Ny karbonin'ny medaly dia 217 alohan'ny androntsika.
Ilay farantsakely dia hita teny akaikin'ny Farihy Trasimeno izay nandresen'i Hannibal ny Romanina, io zava-misy io dia manome antoka ny fisehoan'i Hannibal satria iray amin'ireo fomba hankalazana ny fandresena tamin'ny ady taloha ny fananana vola namely anao.
HANNIBAL dia mainty.
Mitsangana ny Barbarians
3 ampiasaina amin'ny € 10,62
Vidio € 11,79
Nohavaozina farany tamin'ny 17 Jona 2021 5:18 hariva
sokajy NISY NISY ANDRIAMANITRA MISY ANDRIAMANITRA
Raha mitady dikany - Rakitra fanadihadiana (2015)
Zava-masin 'Andriamanitra: Ny fitsipiky ny zava-masina fito momba ny fampisehoana - Doreen Virtue (Audio)
Gloutation, antioxidant izay manentana ny hery fanefitra ary manala ny vatana
Any ampitan'ny sombintsombiny - Rakitra fanadihadiana (2012)